Kolontsaina : Raikitra ny Fanompoam-be ao Boeny
mardi, 28 juillet 2015 20:48
Nanomboka ny alatsinainy 27 jolay teo ny Fanompoambe 2015 tao amin’ny Doany Miarinarivo ao Tsararano Mahajanga. Nandritry ny fikarakarana ireo “mitahy” na ireo taolambalon’Andriamisara, Andriamandisoarivo, Andriamboeniarivo ary i Andriananiana na Andriandahifotsy izay samy Ampanjaka sy Mpimasy nitondra tao Boeny tao anatin’ny trano atao hoe Zombabe dia tehaka sy poa-basy no re nanenika ny doany atsimo.
Ny tanjona amin’ity taona ity dia ny fampitambarana ireo Sakalava sy ireo mpanompo rehetra. Ka na dia nisy aza ny fanambarana tao amin’ny haino aman-jery ny amin’ny fanakanana avy tamin’ireo taranaka Ampanjaka hafa fa tsy tokony ho nisy ny Fanompoambe teto amin’ny doany atsimo, dia tanteraka soa aman-tsara izany.
Nilaza ny Ampanjakaben’i Boeny Jaofeno Richard fa efa “mamindra” izany hoe efa mihasimba ny valamenan’izy Efa-dahy ka mila fanamboarana. Faniriany ny hanombohana ny asa amin’ity taona ity nefa miankina amin’ny fahavononan’ny rehetra izany.
Tsy nanadino ny nanentana ny vahoakany hifidy ihany koa ny Ampanjakaben’i Boeny ka nanafatrafatra azy ireo hanatanteraka izany adidy eo amin’ny firenena izany.
Cheapest Propecia Uk [url=http://cheaplevi.com]how to buy levitra in usa[/url] Viagra Economico Amoxicillin And Clavulanate Acid Donde Puedo Comprar Redustat Orlistat
samedi, 28 octobre 2017 14:12